TETIKA FANALANA NY FILOHA: “Mivavaka mafy mba tsy hahafehezana ny aretina ny mpanohitra” – Free News
mercredi, 8 décembre 2021 - 1:38
Naneho ny heviny ny Depiote Andry Ratsivahiny.
Accueil/Politika/TETIKA FANALANA NY FILOHA: “Mivavaka mafy mba tsy hahafehezana ny aretina ny mpanohitra”
Lucien R. 23 avril 2021
Anisan’ny fepetra voalohany nambaran’ny Filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina amin’izao fidirana amin’ny Hamehana ara-pahasalamana izao ny tokony hanatsaharana ny endrika fanakorontanana rehetra. Tato anatin’ny andro vitsivitsy anefa, tsy miafina intsony ireo avy amin’ny fanoherana milaza fa hanatanteraka hetsika ny zoma 23 Aprily, izany hoe anio, noho ny tsy fanekena ny fepetra raisin’ny Fitondram-panjakana sy ny antony maro hafa koa. Tsy vitsy no taitra tamin’ity serasera mandeha ity satria ny Firenena Malagasy sy ny Firenena rehetra maneran-tany ankehitriny dia mifantoka amin’ny ady amin’ny aretina Covid-19 fa ny mpanohitra eto Madagasikara kosa miady seza sy mitady korontana sy ady an-trano.
Anisan’ny naneho hevitra tamin’izany ny Solombavambahoakan’I Madagasikara voafidy tao amin’ny Distrikan’Atsimondrano, Andry Ratsivahiny, omaly, izay nilaza fa “samy miaina sy mahita ny zava-misy eto Madagasikara isika kanefa dia sahin’ny mpanohitra ny hamoaka ny olona an-dalambe amin’ny 23 Aprily. Manomboka amin’io, hoy izy ireo, ny tolona fanalana ny Filoha. Tsy azo ekena izany, ary ny vahoaka dia mahatsapa ny marina sy ny lalana tokony hizorana”. Mbola nambaran’ity tomponandraikitra ity fa “miezaka ny Fitondram-panjakana mifehy ny aretina, kanefa misy mivavaka mafy mihitsy mba haharingana ny vahoaka malagasy ary izany avy eo no atao antony ny hanalana ny Filoha amin’ny toerany”.
Fihibohana faran’ny herinandro?
Ny Solombavambahoaka Andry Ratsivahiny izay nanipika mazava tsara fa tsy zakan’ny vahoaka malagasy ny fihibohana tanteraka isanandro. Mila mijery amin’ny fo tsy miangatra isika, hoy izy, satria ny fihibohana rehefa faran’ny herinandro dia midika ho fahafaha-mitady rehefa andavanandro, izay sady manaja ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra. Efa fomba fanao hatrany ampita io endrika fihibohana io ka tsy tokony hametrahana adihevitra be, hoy hatrany izy. Tsara ho fantatra fa ao anatin’ny Hamehana ara-pahasalamana isika, izany hoe anaty vanim-potoana manokana, ary afaka handraisana fepetra avokoa izay rehetra miketrika korontana sy manohitohina ny filaminam-bahoaka.
FANOMANANA NY CAN 2021: Voaantso hanatevin-daharana ny Barea i Mathias ao amin’ny PSG (U-19)
RAZANAMAHASOA CHRISTINE : « Fitaovana mahomby indrindra amin’ny fampandrosoana ny vehivavy »
FAHAZOANA RANO FISOTRO MADIO : Tsy azo ihodivirana ny fiaraha-miasa amin’ny sehatra tsy miankina